विवाहको पहिलो रातमै श्रीमानले धेरै माया गर्न थालेपछि श्रीमतीले मागिन् डिभोर्स – Naya Kura Daily
October 19, 2020 249
काठमाडौं । माया र यु’द्धमा हरेक कुरा जायज हुन्छ भन्ने त हामीले सुनेका छौ । यो बीचमा अहिले माया प्रेम सम्बन्धि एउटा घटना बाहिर आएको छ । भएको के भने, एक महिलाले विवाहको एक वर्षपछि श्रीमानसँग सम्बन्धविच्छेद गर्ने सोच बनाएकी छिन् ।
सम्बन्धविच्छेद किन गर्न चाहिन् ? यसको कारण भने निकै रोचक छ । उनका अनुसार उनलाई श्रीमानले अत्यधिक माया गर्ने, कहिले झगडा नगर्ने भएकाले सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहेकी हुन् ।
नेपालमा अर्को एउटा भनाई के पनि चर्चामा ‘चिनी पनि धेरै खाए तितो हुन्छ’ भन्ने भनाई रहेको छ । माया धेरै खाँदा तितो भएपछि एक महिला फुजैरास्थित सारिया कोर्टमा श्रीमानसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न पुगेकी छिन् ।
उनलाई श्रीमानको अत्यधिक माया पचेन । श्रीमानले विवाह गरेको एक वर्षमा कहिले पनि झगडा नगरेको, घरको काममा पनि सहयोग गर्ने उनको बानी देखेर उनलाई रिस उठेको भनिएको छ ।
उनले भनेकी छिन्, ‘उनले मलाई कहिले पनि चर्को आवाजमा बोलेनन् । मलाई उनको अत्यधिक माया र प्रेमले घाँटी अँठ्याएको जस्तो भयो । अझ उनले घरसमेत सफा गर्न सघाए ।’
प्रारम्भिक सुनुवाइको क्रममा अदालतमा उपस्थित श्रीमानले चकित न्यायाधिसको सामू आफूले कहिले पनि गलत नगरेको बताए । दयालु र उत्तम श्रीमान् हुने उद्देश्यसहित आफूले यस्तो गरेको उनले बताए ।
उनले श्रीमतीलाई सम्झाइदिन अदालतलाई आग्रह गरेका छन् । अदालतले यी दुई पक्षलाई मिलनका लागि एउटा मौका दिएको छ । एजेन्सी ।
Prevलक्ष्मीलाई खुसी राख्न यी चिज चढाउनुस्, बन्नुहुनेछ मालामाल
Nextयस्ता हुन्छन् भाग्यमानी युवतीका १२ लक्षण, तपाईमा कति वटा ?
दुम्सी खोज्न ओढारमा पस्दा ढुंगाले च्यापेर मृत्यु
बाँदरलाई हानेको गोली बालकलाई लाग्यो !
भर्खरै जन्मिएको छोरालाई मार्न अमाजुले यस्तो खेल खेलीन् (3014)
डा. योगिता गौतमको विभत्स हत्या (2992)
दक्षिणकाली मन्दिरमा अप्रत्यासित घटना मन्दिरमा सबै नाग बाहिर निस्के अनिष्टको संकेत (2588)
बास्तविकता खुल्यो बिस्कुटको कार्टुनमा भेटिएको बच्चाको ? काठमाडौँमा झाडीभित्र कसले फाल्यो बच्चा(भिडियो) (1943)
जव सडकमा मास्कको अण्डरवेयर मात्र लगाएर निस्किए पुरुषतस्विर सहित (1911)
विवाह गरेको ७ दिनमै विदेशिएका श्रीमानलाई दुवईमा मृत्युदण्डको फैसला, अझै पनि उनको आशमा १७ वर्ष देखि बसेकी छन् धनिषा (1903)
असल श्रीमानको खोजीमा यि करोडपति यु’वती ! यसरी स’म्पर्क गर्नुहोस् – (1772)
कुमारी छोरीसँग बिहे गर्नेलाई साँढे ३ करोड इनाम दिने घोषणा ! (1744)
धन लाभ हुनुअघि मिल्छन् यस्ता संकेत ॐ लेखी पुरा पढ्नुहोस… (1668)
गर्लफ्रेण्ड भेट्न सिड्नी गएका नेपालीले गर्लफ्रेण्डकै साथीलाई रक्सी खुवाइ बलात्कार गरेपछि… (1667)
नाग देबको स्वरुप भएको रुद्राक्षलाई ॐ लेखि सेयर गर्नुहोस ७ दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ !